Foxconn waxay ka sameyn kartaa gawaarida korontada Mareykanka gudaha 2023. Miyey kubiiri doontaa Apple Car? | Waxaan ka socdaa mac
Foxconn waa mid kamid ah lamaanayaasha ugu muhiimsan Apple. Isaga ayaa mas'uul ka ah soo saarista qaybo gaar ah oo markaa loo adeegsado in lagu abuuro aalado ay ka mid yihiin iPhone ama qaar ka mid ah Mac-yada. iyadoo qaar ka mid ah shuruudaha ay soo rogtay shirkadda Apple. Waxaa lagu sameeyay USA waxaana la diyaariyay sanadka 2024.
Markii ay bilaabatay xanta ku saabsan gaariga Apple, sanadkaan, waxaa durba laga hadlayaa taariikho falanqeeyayaasha qaar waxay yiraahdaan marka lagaaro sanadka 2024 waxaan arki karnaa gaariga Apple-ka oo suuqa yaala. ayaa mas'uul ka noqon doona soo saarista gawaarida korontada sanadka 2023 oo tan awgeed wuxuu raadinayaa meelo ku yaal Waqooyiga Ameerika oo uu ka fulin karo.
Caqli ahaan shirkadda ayaa la weydiiyay inay daryeeli doonto Apple Car, laakiin kuwa mas'uulka ka ah ayaa ku dhawaaqay in gaariga Apple-ka xilligan uu yahay uun xan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tilmaamo gaar ah oo tilmaamaya inay qayb ka noqon karto soo saarayaasha gaariga korontada ee shirkadda Californian. Waa inaan si ku-meelgaar ah taariikhda u dhignaa. 2023-2024 sidoo kale waxaan haynaa Foxconn oo dooneysa inay ka fuliso Waqooyiga Ameerika.
In aan weli lagu dhawaaqin sidoo kale waa caadi, maxaa yeelay waa la arkay maxaa ku dhacay hyundai inuu xad dhaaf sameeyay markii uu ku dhawaaqayay heshiisyadiisa Apple taasna ay u horseedday inuu ka dhamaado suurtagalnimada inuu gaariga dhiso, waxay ka dhigi kartaa Foxconn aad uga taxaddar hadalada taas ayaa ka dhigaysa.
Shirkadda la sheegay waxay sheegaysaa inay dooranayso goob goobta ka hor dhammaadka 2021. Goobaha musharraxiinta waxaa ka mid ah Wisconsin iyo Mexico. Waxaan u maleyneynaa inaysan la yaab aheyn in dhamaadka sanadkan aan hayno macluumaad badan oo ku saabsan mowduuca xitaa waan ognahay haddii tani ay noqon doonto shirkadda xulashada mustaqbalka Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Foxconn waxay ka sameyn kartaa gawaarida korontada Mareykanka gudaha 2023. Miyey kubiiri doontaa Apple Car?
Maamulaha erayga sirta ah ee DropBox ayaa xor noqon doona laga bilaabo Abriil